Macalimiinta Dugsiyadda Dawlada Oo Cabasho La Hor Tegey Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Macalimiinta Dugsiyadda Dawlada Oo Cabasho La Hor Tegey Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland
Hargeysa(ANN)Kooxmacalimiin ah oo ka mid ah macalimiinta Dugsiyadda waxbarshada Somaliland ayaa maanta mudaharaad cabasho ah la hortegey Xarunta Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Somaliland ee Magaaladda Hargeysa. Macalimiintan ku dooday
inay yihiin kuwo aan si rasmi ah ugu diiwaangashanayn wasaaradda, balse maamulayaasha dugsiyadda qaarkood qorteen ka hor intaan wasaaraddu kala shaandhayn, isla markaana macalimiinta ayaa sheegay in mushaharkoodii aan la siinin oo ay wasaaradda iyo Maamulayaasha dugsiyaddu isku tuurtuureen horena aan loogu sheegin in laga reebay macalimiinta rasmiga ah.
Sidaa awgeed waxay codsadeen in Wasaaraddu siiso wixii ay ugu tallo-gashay maadaama oo kala shaandhaynta Wasaaradda ka hor ay ka shaqeyn jireen dugsiyadda.
Wasiirka Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aaden, ayaa macalimiintan kula hadashay barxada dhismaha Wasaarada isla-markaana ku qancisay in arintooda dib loo eegi doono si xal looga gaadho.
Marwo Samsam waxay u sheegtay macalimiintan cabashada wasaaradeeda la hortagay in wasaaraddu aanay cid ka dulmi doonin wixii ay xaq u leeyihiin, sidaas daraadeed ay samraan inta la gaadhayo sabtida todobaadka dambe.
Hase yeeshee macalimiinta ayaa ku dooday in aanay wasaaradda ku kalsoonaan Karin oo ay wax isdaba marinta iyo musuqmaasuq ku tilmaameen, balse wasiirka mudo nusa saac ku dhow ay wada hadlayeen macalimiintaa ayaa markii danbe ku qancisay in aan wax musuqmaasuq ah lagu samaynayn ee ay ka war sugaan iyada.
Dhinaca kale, kooxda macalimiinta ah oo cabasho la wareegayay mudooyinkii u danbeeyay ayaa todobaadkii hore laga celiyay xarunta golaha wakiilada oo ay doonayeen inay cabashadooda la hortageen, mana aha markii u horaysay ee sidan oo kale cabasho la yimaadaan xarunta wasaaradda waxbarashada Somaliland.